REENOEMANN: အဖေနှင့် ကျနော်
၁ ယူလိုက်ဦးမယ် :D
ကိုရီနိုရေ ... ဖော်မပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲ .. မိဘကိုချစ်တဲ့ မိဘကို သိတတ်နားလည်တဲ့ .. မိဘရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိတဲ့ သားလိမ္မာတစ်ယောက် ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါမှ ရေရှည်လူ့အောက် မကျနိုင်ပါဘူးဗျာ ... အဖေများနေ့အမှတ်တရအဖြစ် ကိုရီနိုရေးခဲ့တဲ့ အဖေနှင့် ကျနော် ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အဖေ့ကို သတိရလိုက်တာ ...
အကိုရေ အကို. အဖေ အတွက်ရေးလိုက်တဲ. ပို.စ်
တိုင်းဖတ် ရတာ ခံစားရတယ်ဗျာ...ခုလို အဖေ ကိုလေး
စားတဲ. အကိုအစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ. ပါစေ
ရီနို့အဖေအတွက် အမှတ်တရကို လာဖတ်သွားတယ်
ရီနိုကြီးရဲ့ ဖှာထီးအကြောင်းဖတ်ပြီး ထပ်တူခံစားလိုက်ရပါတယ်... စာတပုဒ်လုံးအဆုံးမှာ ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီးဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်... ဝမ်းလည်းနည်းမိပါတယ်...
အဖေကိုချစ်တဲ့သား ဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင် ကြီးပွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ...
ဒို့ သယ်ရင်းတွေက မိဘချစ်တာချင်းတူတော့
ကိုလူထွေး......... ကျနော် စာရေးမကောင်းမှန်း
ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး ဇြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့
ဒီပို့စ်ကို ရေးနေရင်နဲ့ ကျနော်လည်း
မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ ကျနော်မှာ အဖေနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ချုံပွဲချ ငိုရလောက်အောင်
ဘယ်ချိန်တွေးတွေး ကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသေးတရ်။ အခွင့်သားခဲ့ရင်ပြောပြချင်ပါသေးတရ် အားလုံးကို။
ကိုရီနိုိရဲ့အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ပု့ိစ်ကို
အဖေ့ အကြောင်း ရီနို့ အကြောင်း
ဒီမောင်လေး တယောက်အတွက် အဖေ
ဂုဏ်ယူ မှာ အသေအချာပါ
အဖေအကြောင်းလေး လာခံစားပါတယ်ဗျာ.. အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ အကိုရေ
များသောအားဖြင့် သားတွေက အမေ ကို ပိုချစ်တယ်လို့
ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတဲ့ အချိန်မှာ အဖေ့ကို ပိုပြီးနားလည်သွားမိတယ်...။
ဒီနေရာမှာဆို အဖေ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ..အဲဒီတုန်းက အဖေအရမ်းပင်ပန်းခဲ့မှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက အခက်အခဲ ကြုံတော့ အလိုလိုဝင်လာတယ်...။
အဖေရော အမေရော အစားထိုးလို့ မရနိင်ပါဘူး..။
ရီနို့ဖေဖေ အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ် မောင်လေးရေ၊ ကြိုးစာပါ ရီနိုရေ၊ ရီနိုဖေဖေက ကောင်းရာမွန်ရာကနေ ပြုံးပီး သားလိမ္မာကို ကြည့်နေမှာပါ
အဖေကိုချစ်တတ်သူမို့ အဖေ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ရင်း ခံစားမိပါတယ်။ အဆင်ပြေရင်ပိုစ့်တင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။
အကိုရေ အကိုနဲ့ အကုိ့အဖေအကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ် ..
မောင်လေးေ၇ အဖေအတွက်ပိုစ့်လေး လာဖတ်သွားတယ်နော်။
အခုမှဖတ်လို့ ပြီးတော့တယ် စိတ်တောင်မကောင်းပါဘူးရှင်..ကိုရီနို အဖေ ကောင်းရာဘုံ ဘဝကသာဓု ခေါ်မှာပါရှင်
ဖေဖေကို ချစ်ပါတယ်.....ကိုရီနိုကြီးနဲ့အတူ ထပ်တူ ခံစားရင်း...
ဖေဖေချစ်တဲ့ သားသားရီနို အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း...
သားလိမ္မာကြီး အောင်မြင်မှုအပေါင်းကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ...
အဖေများနေ့က ဇွန်၂၁ မှလေ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင် ချီးမြင့်တာပေါ့နော် :) :D
ကိုရီနိုရေ...အဖေများ အကြောင်းလာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ မိဘကိုတမ်းတလွမ်းဆွတ်နေသူတွေ အတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခမတွေ့ ပါဘူး။ တွေ့ လည်းခဏပါ။ ကိုရီနိုက အဖေစကားနားထောင်လို့ဘောလုံးမကန်တတ်သလို....ကျနော်လည်း သစ်ပင်မတက်တတ်ဘူးဗျ...:P။ အားပေးခင်မင်လျှက်...
ကိုရီနိုရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အလုပ်တစ်ဘက် ကျောင်းတစ်ဘက် ရူပ်ထွေးနေတဲ့အချိန် ကိုရီနို လာအော်သွားမှ အဖေများနေ့ဆိုတာ ရုတ်တရက်သိလိုက်တယ် သိတော့မှ အဖေကြီး အကြောင်း ပို့စ်တင်ဖြစ်တယ် တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကို့ရင်ထဲမှာ အကို့အဖေရှင်သန်နေဆဲပဲဆိုတာ ဖတ်ရင်း ခံစားရတယ်။
ရီနိုမာန် ရဲ့ ဖေဖေ သနားပါတယ်နော် သားကို တော်တော်ချစ်တယ်ထင်တယ်
လင့်ခ် မယူရသေးလို့ ယူသွားတယ် ခွင့်တောင်းပါတယ်